ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်(၈)ဦး တာချီလိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိ ( ရုပ်သံ ) | Tachileik Online TV News
Tachileik Online TV News
Home » ၈၈ , သတင်း , နိုင်ငံရေး » ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်(၈)ဦး တာချီလိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိ ( ရုပ်သံ )
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်(၈)ဦး တာချီလိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိ ( ရုပ်သံ )
Written By Tachileik News Agency on Monday, 12 May 2014 | 04:14
တာချီလိတ်မြို့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း အပြန်အလှန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၌ ဟောပြောဆွေးနွေးဖို့ရန်အတွက် ကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်သည့် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်(၈)ဦးတို့သည် 4.6.2012 နေ့လည် ၂း၃၀မိနစ်တွင် တာချီလိတ် လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိသည်။
ကြိုဆိုသောဗီဒီယိုကို ကြည့်လိုပါက အောက်တွင် ကြည့်ပါ
၎င်းတို့အား တာချီလိတ်မြို့မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးမှူး ဦးကျော်ဆွေ ခေါင်းဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ(၅၀)ခန့်တို့နှင့်အတူ တာချီလိတ်မြို့ရှိ လူငယ်များမှလည်း တာချီလိတ်လေဆိပ်သို့ သွားရောက် ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး ရွှေရေကန်ဟိုတယ်သို့ လိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ပုံများကို အပြည့်အစုံကြည့်လိုက်က နိပ်ပါ
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်းများကို တာချီလိတ်မှကြိုဆိုနေကြစဉ် 88 photos
mghtmght007 14 May 2014 at 10:03
၀န်ကြီး ၀မ်းတွင်း ၈၈ Advertisings android cncmc Crime eagle EasternShan Education Entertainment FDA General Han Soe Htike Ko Zat Lashio Mobile Team myanmar_Thai Nay Phyo Myint News NIEC NLD NoNo NorthernShan OSS Politics RiA San Phyo Tun Tachileik TBC TVNews UWSA Zwe Myat Zwe_Myat ကယား ကာလိ ကိုဇက် ကိုလင်း ကိုဇောင်း ကျန်းမာရေး ကျိုင်းတုံ ကျိုင်းတုံ ကျိုင်းလပ် ခိုးမှု ချင်းပြည်နယ် စည်ပင် စည်ပင်သာယာရေး စာပေဟောပြောပွဲ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး စီးပွားရေး ဆက်သွယ်ရေး ဆွမ်းလောင်းပွဲ တရားပွဲ တာချီလိတ် တာလော့ဈေး တိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသားသတင်း ထင်သာမြင်သာ ထိုင်း-မြန်မာ ထိုင်းသတင်း ထုတ်ပြန်ချက် ထူးဆန်း ဓမ္မစကူးလ် နယ်စပ်သတင်း ပညာရေး ပရဟိတ ပါတီသတင်း ပြိုင်ပွဲ ဘာသာပြန်သတင်း ဘာသာရေး မင်းသုတ မိုင်းဆတ် မီးပုံးပျံ မီးလင်းရေး မီးသတ် မီးလောင်မှု မူးယစ် မူးယစ်သတင်း မှုခင်း မန္တလေး ယာဉ်စည်းကမ်း ယာဉ်တိုက်မှု ပြစ်မှု ပြစ်မှုသတင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် မြန်မာ - ထိုင်း မြန်မာ-ထိုင်းသတင်း မြန်မာ-လာအို ရခိုင် ရခိုင်ပြည်နယ် ရှမ်း ရှမ်းတောင် ရှမ်းမြောက် ရှမ်းရှေ့ ရုပ်သံဆောင်းပါး ရဲတပ်ဖွဲ့ လ၀က လက်မှု လမ်းတံတား လျှပ်စစ် လားရှိုး လားဟူ လာအို လုယက်မှု လူမှုရေး လူမှုရေးရာ လူသတ်မှု လူသေမှု လွှတ်တော် လွှတ်တော်သတင်း သစ်တော သတင်း သတင်းဆောင်းပါး သတ္တုလုပ်ငန်း သဘာဝဘေး သင်္ကြန် အခွန်အကောက် အင်တာဗျုး အင်တာဗျူး အစိုးရ အားကစား အာခါ အာဇာနည်နေ့ အိမ်ခြံမြေ အနုပညာ ကောက်ကြောင်း တွေ့ဆုံခန်း တွေ့ဆုံပွဲ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း တောင်ကြီး ဒေသစီးပွားရေး ဖျော်ဖြေရေး မြေယာ ရွေးကောက်ပွဲ ရေလွှမ်းမိုးမှု ရေဘေး လေလံ နှစ်သစ်ကူး နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေး နိုင်ငံရေး နိုနို
(ရုပ်သံ) ဌာနဆိုင်ရာများ စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲဖို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးပြော
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကို နောက်ကြောင်းပြန်တရွတ်တိုက်ဆွဲဝါဒရှိနေသ၍ တိုင်းပြည်နွံ့ထဲ ချောက်ထဲရှိနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ (၉၀)ရာခိုင်နှုန...
အာဇာနည် (၉)ဦးက ဘယ်သူတွေလဲ..?
ဇူလိုင်(၁၉)မှာ လုပ်ကြံမှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအ၀င် အာဇာနည်(၉)ဦး က ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘယ်အချိန်က လုပ်ကြံခံရတာလဲ၊ ဘယ်...
စတုတ္ထတန်းကျောင်းသားလေး ရွတ်ပြသည့် ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်း (ပထမဆု)
ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည်ဖြစ်သော (၆၇)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား အလေးထားဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် တာချီလိတ်မြို့တွင...
Copyright © 2013. Tachileik Online TV News - All Rights Reserved